Xisbiyada siyaasadeed ee Tunisia ayaa ka digaya suurtagalnimada in rabshaduhu dib u soo laabtaan - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Xisbiyada siyaasadeed ee Tunisia ayaa ka digaya suurtagalnimada in rabshaduhu dib u...
Xisbiyada siyaasadeed ee Tunisia ayaa ka digaya suurtagalnimada in rabshaduhu dib u soo laabtaan
Afar xisbi siyaasadeed oo ka jira Tunisia ayaa ka digay in ay suuragal tahay in ay dib ugu soo laabtaan rabshaduhu dalkaa ka dib markii uu xukunka qabsaday madaxweyne Kais Saied.
Digniinta ayaa dhacday intii lagu guda jiray shir jaraa’id oo Talaadadii lagu qabtay caasimadda Tunis.
Waxay daba socotaa toddobaadkii hore Madaxweynaha oo qeybo ka mid ah dastuurka joojiyay oo hadda digreeto ku xukumaya waddanka. Mid ka mid ah madaxda xisbiga ayaa madaxweynaha ku eedeeyay afgambi dastuuri ah.
“Maanta waxaan ku noolnahay xilli sharci-darro ah waxaana soo saarnay bayaan wadajir ah wixii ka dambeeyay go’aannadii 22-kii December. Waxaan u aragnaa in madaxweynuhu sameeyay afgambi dastuuri ah” ayuu ku eedeeyay Ghazi Chaouachi, xoghayaha Xisbiga Dimoqraadiyadda Hadda.
Dhaqaale-yahankii iyo wasiirkii hore Fadhel Abdelkefi, oo xisbigiisa Afek Tounes uu laba kursi ku leeyahay golaha la kala diray, ayaa ka digay musiibo ku soo fool leh dhaqaalaha Tunisia oo horeba u liidatay.
“Lubnaan wax dambe ma soo dejin karto; qamadi, sonkor, saliid midna. Korontada iyo biyaha weli waa la gooyaa. isticmaal isla sarbeebtaa si aad u xasuusnaato inaan wali waddada weyn ku jirno oo aan halis ugu jirno inaan helno amaah aan la bixin “, ayuu yiri Fadhel Abdelkefi
Tallaabada muranka dhalisay ee Madaxweyne Kais Saied waxay daba socotaa sannado is-mari waa siyaasadeed oo uu uga sii daray cudurka faafa ee coronavirus.
Previous articleKalluumeysatada harada Chad ayaa ku leday kadib markii Nigeria ay duqeyn ku dishay 20 qof
Next articleMalian Prime Minister welcomed by supporters in Bamako after speech at UN in New York